Mbrɛ Ibesi Enya Dzenhyɛ Efi Kyerɛwnsɛm No Mu | Ɔweɔn-Aban Adzesua
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | March 2021
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Baoule Basque Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Drehu Dutch Edo Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Hunsrik Iban Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mfantse Min Nan (Taiwan) Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nsenga Nsenga (Mozambique) Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Phimbi Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno Spanish Sranantongo Swahili Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zulu
ADZESUA ASƐM 11
Mbrɛ Ibesi Enya Dzenhyɛ Efi Kyerɛwnsɛm No Mu
“Abotar nye awerɛkyekyer Nyankopɔn no mma hom nnya adwenkor.”​—ROM. 15:5.
NDWOM 94 Hɛn Enyi Sɔ Nyankopɔn N’asɛm No
1. Ebɛn ɔhaw ahorow na bi a Jehovah no nkorɔfo hyia?
ANA irihyia ɔhaw bi a no mu yɛ dzen? Bi a obi a ɔwɔ asafo no mu ayɛ adze ma wɔaayɛ wo yaw. (Jas. 3:2) Anaa osiandɛ esom Jehovah ntsi, bi a w’edwumamufo anaa wo skuulfo bedzi woho fɛw. (1 Pet. 4:3, 4) Anaaso dɛ, bi a w’ebusuafo robɔ mbɔdzen dɛ wobesiw wo kwan dɛ ebɔkɔ asafo nhyiamu anaa ebɛkã wo gyedzi ho asɛm akyerɛ afofor. (Matt. 10:35, 36) Sɛ ɔhaw a irihyia no mu yɛ dzen paara a, bi a ebɛtse nka dɛ sɛ igyaa dɛ erosom Jehovah a woho bɔtɔ wo. Naaso ibotum enya awerɛhyɛmu dɛ ɔmmfa ho nsɛndzendzen biara a ibehyia no, Jehovah bɛma wo nyansa a edze bedzi ho dwuma nye ahoɔdzen a edze begyina ano.
Sɛ yɛrohwehwɛ akwankyerɛ a ɔbɔboa hɛn ma yeedzi ɔhaw pɔtsee bi ho dwuma a, ebɛnadze na yebotum ayɛ?
1. BƆ MPAA
Ansaana ebɛkenkan Bible no, serɛ Jehovah dɛ ɔmboa wo ma hu mfaso a ɔwɔ dza erebɛkenkan no do (Hwɛ nkyekyɛmu 3)
2. TWA KYERƐWSƐM NO HO MFONYIN
Bɔ mbɔdzen twa dza ɔrokɔ do no ho mfonyin na fa no dɛ ɔwo nye nyia erekenkan noho asɛm no (Hwɛ nkyekyɛmu 4)
3. DWENDWEN HO
Sie abotar susu dza akenkan no ho yie, na hwɛ dɛ ɔfa woho dɛn (Hwɛ nkyekyɛmu 5)
4. FA YƐ EDWUMA
Sɛ isũa adze na edze dza esũa no yɛ edwuma a, ɔbɔboa wo ma eesisi gyinae pa, eenya asomdwee, na eenya gyedzi a no mu yɛ dzen (Hwɛ nkyekyɛmu 6)
2. Dɛ mbrɛ Romefo 15:4 kyerɛ no, sɛ yɛkenkan Nyankopɔn n’Asɛm no a, ebɛn nkantando na obenya wɔ hɛn do?
2 Jehovah maa wɔyɛɛ nyimpa ahorow a wonndzi mũ naaso wɔkɔr do gyinaa ɔhaw a no mu yɛ dzen ano ho kyerɛwtohɔ a ɔkɔ ekyir wɔ n’Asɛm no mu. Ebɛnadze ntsi a? Dɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum esũa biribi efi mu. Dɛm pɛpɛɛpɛ na Jehovah maa ɔsomafo Paul kyerɛwee. (Kenkan Romefo 15:4.) Sɛ yɛkenkan kyerɛwtohɔ ahorow a ɔtse dɛm a, obotum ama yeenya awerɛkyekyer na enyidado. Naaso sɛ yebenya do mfaso a, ɔsɛ dɛ yɛyɛ pii kyɛn Bible no a yɛbɛkenkan no kɛkɛ. Ɔsɛ dɛ yɛma kwan ma Kyerɛwnsɛm no nye hɛn nsusui hyia na ɔka hɛn akoma. Sɛ erohwehwɛ akwankyerɛ a ɔbɔboa wo ma eedzi ɔhaw pɔtsee bi ho dwuma a, ebɛnadze na ibotum ayɛ? Ndzɛmba anan bi wɔ hɔ a ibotum ayɛ no ndzidzido ndzidzido. Ɔno nye dɛ: (1) Bɔ mpaa, (2) Twa kyerɛwsɛm no ho mfonyin, (3) Dwendwen ho, na (4) Fa yɛ edwuma. Ma yɛnhwɛ dza yebotum ayɛ wɔ ndzɛmba no mu biara mu. * Afei yɛbɛfa dɛm kwan a wɔdze sũa adze yi do esũa biribi efi nsɛm a osisii wɔ Ɔhen David nye ɔsomafo Paul hɔn asetsena mu no mu.
3. Ansaana ebɛkenkan Bible no, ebɛnadze na ɔsɛ dɛ eyɛ, na ebɛnadze ntsi a?
3 (1) Bɔ mpaa. Ansaana ebɛkenkan Bible no, serɛ Jehovah dɛ ɔmboa wo ma hu mfaso a ɔwɔ dza erebɛkenkan no do. Dɛ nhwɛdo no, sɛ erohwehwɛ afotu a ɔbɔboa wo ma eedzi ɔhaw bi ho dwuma a, serɛ Jehovah dɛ ɔmboa wo ma hu Bible mu ngyinadonsɛm a ɔbɔboa wo ma eehu dza ɔsɛ dɛ eyɛ.​—Phil. 4:6, 7; Jas. 1:5.
4. Ebɛnadze na obotum aboa wo ma eehu Bible mu kyerɛwtohɔ a erekenkan no dɛ asɛm a orisi?
4 (2) Twa kyerɛwsɛm no ho mfonyin. Mbrɛ Jehovah bɔɔ hɛn ma yetum twa ndzɛmba ho mfonyin no yɛ nwanwa. Dza ɔbɔboa wo ma eehu Bible mu kyerɛwtohɔ a erekenkan no dɛ asɛm a orisi no, bɔ mbɔdzen twa dza ɔrokɔ do no ho mfonyin na fa no dɛ ɔwo nye nyia erekenkan noho asɛm no. Bɔ mbɔdzen dɛ ibohu ndzɛmba a ohunii no na hwɛ dɛ, mbrɛ bi a ɔtsee nka no, ebɛtse nka dɛmara.
5. Sɛ wɔkã dɛ yɛndwendwen kyerɛwsɛm a yɛakenkan no ho a, ɔkyerɛ dɛn? Yebesi dɛn ayɛ dɛm?
5 (3) Dwendwen ho. Sɛ wɔkã dɛ yɛndwendwen kyerɛwsɛm a yɛakenkan no ho a, dza ɔkyerɛ nye dɛ, yebesie abotar esusu dza yɛakenkan no ho yie, na yaahwɛ dɛ ɔfa hɛnho dɛn. Sɛ eyɛ dɛm a, ɔbɔboa wo ma eetum dze asɛm no atoto woho anaa nsɛm afofor bi ho na eenya asɛm no ho ntseasee a no mu dɔ. Sɛ ekenkan Bible no na anndwendwen ho a, ɔtse dɛ mbrɛ etwitwa tam egu pon do a emmpamee. Sɛ edwendwen dza akenkan no ho a, ɔtse dɛ erepam tam a etwitwa no ma aabɛyɛ atar. Dza ɔbɔboa wo ma aadwendwen dza ekenkan no ho no, ibotum ebisa woho nsɛmbisa bi tse dɛ dza odzidzi do yi na ebua: ‘Ebɛnadze na nyia merekenkan noho asɛm no yɛɛ dze dzii ne haw no ho dwuma? Jehovah sii dɛn boaa no? Ebɛn kwan do na esuadze a menya efi dza makenkan no mu no botum aboa me ma meegyina me haw ano?’
6. Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ yɛdze dza yesũa no yɛ edwuma?
6 (4) Fa yɛ edwuma. Jesus kãa dɛ, sɛ yesũa biribi na yaammfa annyɛ edwuma a, yɛtse dɛ ɔbarimba bi a osi ne dan wɔ anhwea mu. Ɔbɛyɛ edwumadzen, naaso ne nyinara yɛ ɔberɛgu. Ebɛnadze ntsi a? Osiandɛ sɛ ehum tu anaa nsuyirii ba a, dan no bobubu. (Matt. 7:24-27) Dɛm pɛpɛɛpɛ na sɛ yɛbɔ mpaa, yetwa kyerɛwsɛm no ho mfonyin, yɛdwendwen ho na yaammfa dza yeesũa no annyɛ edwuma a, yɛbɛberɛ egu. Sɛ ɔba no dɛ yehyia ɔhaw anaa ɔsoɛrtsia a ɔsɔ hɛn gyedzi hwɛ a, yerunntum nngyina ano. Naaso sɛ yesũa adze na yɛdze dza yeesũa no yɛ edwuma a, ɔbɔboa hɛn ma yeesisi gyinae pa, yeenya asomdwee, na yeenya gyedzi a no mu yɛ dzen. (Isa. 48:17, 18) Hom mma yɛmfa ndzɛmba anan a yeesusu ho yi nhwɛ dza yebotum esũa efi asɛm bi a osii wɔ Ɔhen David n’asetsena mu.
EBƐNADZE NA IBOTUM ESŨA EFI ƆHEN DAVID HƆ?
7. Ebɛn Bible mu kyerɛwtohɔ na yerubosusu ho?
7 Ana wo nyɛnko bi anaa wo busuanyi bi ayɛ biribi ma wɔayɛ wo yaw? Sɛ dɛm a, adze a obotum aboa wo nye dɛ ibosusu dza Ɔhen David yɛe aber a ne ba Absalom yɛɛ adze ma ɔyɛɛ no yaw na ɔbɔɔ mbɔdzen mpo dɛ ɔbɛgye ahendzi no efi ne nsamu no ho.​—2 Sam. 15:5-14, 31; 18:6-14.
8. Ebɛnadze na ibotum ayɛ ama eenya Jehovah no mboa?
8 (1) Bɔ mpaa. Ansaana ebɛkenkan kyerɛwtohɔ no, kã mbrɛ isi tse nka wɔ adze a ɔyɛ yaw a wɔdze ayɛ wo no ho asɛm kyerɛ Jehovah. (Ndw. 6:6-9) Kã mbrɛ isi tse nka pɔtsee no kyerɛ no. Afei, serɛ Jehovah dɛ ɔmboa wo ma hu ngyinadonsɛm a obotum aboa wo ma eegyina tsebea a no mu yɛ dzen yi ano.
9. Asɛm a osii wɔ David nye Absalom ntamu no, ebɛkã ho asɛm dɛn?
9 (2) Twa kyerɛwsɛm no ho mfonyin. Dwendwen nsɛm a osisii wɔ dɛm kyerɛwtohɔ yi mu no ho, na twa mbrɛ osii kaa Ɔhen David no ho mfonyin wɔ w’adwen mu. David ne ba Absalom dze mfe pii yɛɛ ndzɛmba a ɔbɛma amamfo no apɛ n’asɛm. (2 Sam. 15:7) Aber a Absalom hun dɛ ndzɛmba atotɔ mu no, ɔsomaa akwanserafo kɔr Israel nyinara dɛ wɔnkɔboaboa amamfo no ano ama wɔaagye no ato mu dɛ hɔn hen. Afei, David n’anyɛnkofo a wɔbɛn no paara nye n’afotufo no mu kor a wɔfrɛ no Ahithophel mpo, Absalom tutui guu n’aso mu araa ma ɔbɛkaa noho wɔ n’etuatsew no mu. Absalom sii noho hen, na ɔbɔɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛkyer David a nna obotum aba dɛ ɔyar dzendzenndzen dɛm aber no, na oeeku no. (Ndw. 41:1-9) David tsee pɔw a Absalom abɔ no na oguanee fii Jerusalem. Owiee ase no, Absalom no dɔm nye David no dɔm a wodzi no nokwar no dze bɔɔ enyi. Absalom nye no dɔm no dzii ɔkogu, na wokum no.
10. Nkyɛ ebɛnadze na Ɔhen David botum ayɛ?
10 Afei, twa mbrɛ bi a David sii tsee nka ber a dɛm nsɛm yi too no no ho mfonyin hwɛ. Nna ɔdɔ Absalom na ɔwɔ Ahithophel so no mu gyedzi. Naaso, dɛm nyimpa beenu a wɔbɛn no paara no yii no mae. Wɔyɛɛ adze ma ɔyɛɛ David yaw papaapa, na wɔbɔɔ mbɔdzen mpo dɛ woboku no. Nkyɛ obotum aba dɛ David renngye n’anyɛnkofo nkaa no nndzi, na bi a obenya adwen dɛ hɔn so wɔakɛka Absalom ho. Nkyɛ obotum adwen nankotsee no ho na oeeguan efi ɔman no mu. Anaa nkyɛ n’abaw mu botum ebu koraa. Naaso David annyɛ dza yɛakã ho asɛm yi mu biara. Mbom, otumii gyinaa ɔhaw a no mu yɛ dzen yi ano. Ebɛnadze na ɔboaa no ma ɔyɛɛ dɛm?
11. Ebɛnadze na David yɛe wɔ tsebea a no mu yɛ dzen a ohyiae no ho?
11 (3) Dwendwen ho. Ebɛn esuadze na ibotum enya efi kyerɛwtohɔ yi mu? Bisa woho dɛ, “Ebɛnadze na David yɛe a ɔboaa no?” David ammbɔ hũ, na ɔammper noho ennsisi gyinae a nyansa nnyi mu. Dɛmara so na ɔamma suro annhyɛ no do araa ma annyɛ dɛ onnhu dza ɔnnyɛ. Mbom, ɔbɔɔ mpaa hwehwɛɛ Jehovah hɔ mboa. Afei so, obisaa n’anyɛnkofo hɔ mboa. Bio so, gyinae a osisii no, ɔdze yɛɛ edwuma ntsɛmara. Ɔwɔ mu dɛ asɛm a osii no yɛɛ David yaw papaapa dze, naaso ɔkɔr do nyaa afofor mu ahotodo, na ɔammfa obiara ho ebufuw annhyɛ no mu. Ɔkɔr do dze noho too Jehovah do, na ɔgyee n’anyɛnkofo no so dzii.
12. Ebɛnadze na Jehovah yɛe dze boaa David?
12 Jehovah sii dɛn boaa David? Sɛ eyɛ nhwehwɛmu a, ibohu dɛ Jehovah maa David ahoɔdzen a ohia no ma ɔdze gyinaa ne haw no ano. (Ndw. 3:1-8; etsifi asɛm) Jehovah hyiraa gyinae a David sisii no do. Afei, ɔboaa David n’anyɛnkofo a wodzi no nokwar no ma wɔkõe bɔɔ hɔn hen no ho ban.
13. Ibesi dɛn esũasua David aber a obi ayɛ adze ma wɔayɛ wo yaw no? (Matthew 18:15-17)
13 (4) Fa yɛ edwuma. Bisa woho dɛ, ‘Mibesi dɛn esũasua David?’ No ho behia dɛ idzi ɔhaw no ho dwuma ntsɛmara. Mbrɛ tsebea no tse no na ɔbɛkyerɛ dɛ ibotum dze Jesus n’afotu a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Matthew tsir 18 no ayɛ edwuma tsenn anaa edze ngyinadosɛm a ɔwɔ mu no ayɛ edwuma. (Kenkan Matthew 18:15-17.) Naaso ɔnnsɛ dɛ eper woho gyina mbrɛ isi tse nka no do sisi gyinae. Ɔsɛ dɛ ebɔ mpaa serɛ Jehovah dɛ ɔmma wo abotar na nyansa a ibotum dze egyina tsebea no ano. Kɔ do nya w’anyɛnkofo mu ahotodo, na nya ɔpɛ dɛ ebɛgye mboa a wɔdze bɛma wo no ato mu. (Mbɛ. 17:17) Dza ɔkyɛn ne nyinara no, fa afotu a Jehovah dze ma wo wɔ n’Asɛm mu no yɛ edwuma.​—Mbɛ. 3:5, 6.
EBƐNADZE NA IBOTUM ESŨA EFI PAUL HƆ?
14. Ebɛn tsebea ahorow mu na bi a 2 Timothy 1:12-16; 4:6-11, 17-22 bɛhyɛ wo nkuran?
14 Ana irihyia ɔsoɛrtsia fi w’ebusuafo hɔ? Anaadɛ etse ɔman a wɔdze nsa ato Jehovah no nkorɔfo hɔn dwumadzi do anaa mpo wɔabra? Sɛ dɛm a, bi a kyerɛwnsɛm a odzidzi do yi a ebɛkenkan no bɛhyɛ wo nkuran: 2 Timothy 1:12-16 nye 4:6-11, 17-22. * Paul kyerɛɛw dɛm nsɛm yi aber a nna ɔda efiadze no.
15. Ebɛnadze na ibotum aserɛ efi Jehovah hɔ?
15 (1) Bɔ mpaa. Ansaana ebɛkenkan kyerɛwnsɛm no, kã wo haw no nye mbrɛ isi tse nka no ho asɛm kyerɛ Jehovah. Kã mbrɛ isi tse nka pɔtsee no kyerɛ no. Afei, serɛ Jehovah dɛ ɔmboa wo ma hu ngyinadonsɛm a ɔwɔ kyerɛwtohɔ a ɔfa nsɔhwɛ a Paul hyiae no mu a ɔbɔboa wo ma eehu dza ɔsɛ dɛ eyɛ wɔ ɔhaw a irihyia no ho.
16. Tsebea a Paul kɔr mu no, ebɛkã ho asɛm dɛn?
16 (2) Twa kyerɛwsɛm no ho mfonyin. Fa no dɛ ɔwo na irihyia nsɔhwɛ a Paul hyiae no. Wɔdze nkɔnsɔnkɔnsɔn egu ne nsa ma ɔda efiadze wɔ Rome. Nna ɔakɛda efiadze da, naaso dɛm aber yi dze nna onyim dɛ mbrɛ ɔtse biara oku ara na woboku no. Nna n’anyɛnkofo binom egya ne baako hyɛɛ ne nsa. Afei so, nna ɔayɛ mberɛw.​—2 Tim. 1:15.
17. Nkyɛ ebɛnadze na Paul botum ayɛ?
17 Nkyɛ Paul botum dze n’adwen esi mber bi a etwa mu no do, na oeesusu dɛ sɛ ɔammbɛyɛ Christiannyi a ɔyɛ nsi a, nkyɛ wɔremmfa no nnkɔto efiadze. Nkyɛ obotum dze mbarimba a wɔwɔ Asia mantɔw mu a wogyaa no hɔ no hɔnho ebufuw ahyɛ no mu, na oegyaa dɛ ɔdze noho bɔto n’anyɛnkofo afofor do. Naaso Paul annyɛ dza yɛakã ho asɛm yi mu biara. Ebɛnadze ntsi na onyaa awerɛhyɛmu dɛ n’anyɛnkofo no bɔkɔ do edzi no nokwar na Jehovah so botua no kaw?
18. Paul yɛɛ n’adze dɛn wɔ nsɔhwɛ a ohyiae no ho?
18 (3) Dwendwen ho. Bisa woho dɛ, “Ebɛnadze na Paul yɛe dze boaa noho?” Aber mpo a nna Paul nyim dɛ ɔrennkyɛr biara ma woeeku no no, no werɛ emmfir asɛm a no ho hia papaapa no​—dɛ ɔdze enyimnyamhyɛ bɛbrɛ Jehovah. Afei so, ɔkɔr do dwendween mbrɛ obesi ahyɛ afofor nkuran no ho. Bio so, ɔdze noho too Jehovah do dze nam mpaa a ɔbɔɔ no dabaa no do. (2 Tim. 1:3) Dɛ nkyɛ Paul bɔkɔ do dze n’adwen esi n’anyɛnkofo a wogyaa no hɔ no do no, ɔannyɛ dɛm, mbom no, ndzɛmba ahorow a n’anyɛnkofo a wodzi no nokwar fii ɔdɔ mu yɛɛ dze boaa no no, ɔkyerɛɛ ho enyisɔ kɛse. Ɔno da nkyɛn a, Paul kɔr do sũaa Nyankopɔn n’Asɛm no. (2 Tim. 3:16, 17; 4:13) Dza ɔkyɛn ne nyinara no, nna ɔwɔ ahotodo kɛse dɛ Jehovah na Jesus dɔ no. Nna wonngyaa no, na mbom nna wobotua nokwardzi a ɔdze som no do kaw.
19. Ebɛnadze na Jehovah yɛe dze boaa Paul?
19 Nna Jehovah abɔ Paul kɔkɔ dɛ, osiandɛ ɔaabɛyɛ Christiannyi ntsi obehyia ɔsoɛrtsia, naaso nna ɔsɛ dɛ ogyina ano. (Andw. 21:11-13) Ebɛnadze na Jehovah yɛe dze boaa Paul? Jehovah buaa Paul ne mpaabɔ no, na mber kɔr do no ɔhyɛɛ no dzen. (2 Tim. 4:17) Paul nyaa awerɛhyɛmu dɛ obenya edwumadzen a ɔayɛ no ho akatua. Bio so, ɔmaa Paul n’anyɛnkofo a wodzi no nokwar no yɛɛ ndzɛmba ahorow dze boaa no.
20. Aber a Romefo 8:38, 39 wɔ w’adwen mu no, ibesi dɛn esũasua Paul?
20 (4) Fa yɛ edwuma. Bisa woho dɛ, ‘Mibesi dɛn esũasua Paul?’ Ɔsɛ dɛ yɛhwɛ kwan dɛ osian hɛn gyedzi ntsi wɔbɔsoɛr etsia hɛn dɛ mbrɛ wɔsoɛree tsiaa Paul no. (Mark 10:29, 30) Sɛ yɛbɔkɔ do ekura hɛn emudzi mu aber a yerihyia nsɔhwɛ no a, no ho hia dɛ yɛdze hɛnho to Jehovah do dze nam mpaa a yɛbɔbɔ no do, na yɛkɔ do sũa n’Asɛm no dabaa. Afei so, ɔsɛ dɛ yɛma ɔtsena hɛn adwen mu aber nyina dɛ adze kor a no ho hia paara a yebotum ayɛ nye dɛ yɛdze enyimnyamhyɛ bɛbrɛ Jehovah. Sɛ yɛyɛ dɛm a, yɛbɛgye edzi ampaara dɛ Jehovah rinngyaa hɛn da na biribiara nnyi hɔ a obi botum ayɛ a ɔbɛtsew hɛn efi ɔdɔ a ɔwɔ ma hɛn no ho.​—Kenkan Romefo 8:38, 39; Heb. 13:5, 6.
SŨA BIRIBI FI NYIMPA ANOKWAFO AFOFOR A HƆNHO NSƐM WƆ BIBLE MU NO HƆ
21. Ebɛnadze na ɔboaa Aya na Hector ma wodzii nsɛndzendzen a wohyiae no do?
21 Ɔmmfa ho mbrɛ hɛn nsɛm tsebea tse biara no, Bible mu nhwɛdo ahorow botum aboa hɛn ma yeenya ahoɔdzen dze eegyina ano. Dɛ nhwɛdo no, ɔkwampaaefo bi a ɔwɔ Japan a wɔfrɛ no Aya kãa dɛ, Jonah n’asɛm no na ɔboaa no ma odzii bagua mu adasedzi ho suro a nna ɔwɔ no do. Aberantsɛ bi a ɔwɔ Indonesia a wɔfrɛ no Hector a n’awofo nnsom Jehovah no kãa dɛ, Ruth no nhwɛdo no na okenyaan no ma onyaa ɔpɛ dɛ obosũa Jehovah ho adze na ɔaasom no.
22. Ibesi dɛn enya Bible mu drama ahorow nye nsɛm a ɔba ndzidzido ndzidzido a wɔato dzin “Sũasua Hɔn Gyedzi” no do mfaso kɛse?
22 Henfa na ibenya Bible mu nhwɛdo ahorow a ɔbɛhyɛ wo gyedzi dzen? Hɛn video ahorow, drama ahorow a wɔbɔ tsie, nye nsɛm a ɔba ndzidzido ndzidzido a wɔato dzin “Sũasua Hɔn Gyedzi” no boa hɛn ma yehu Bible mu nsɛm dɛ mbrɛ orisi. * Ansaana ebɔhwɛ, ibetsie anaa ebɛkenkan nsɛm a wɔayɛ mu nhwehwɛmu akɔ ekyir yi, serɛ Jehovah dɛ ɔmboa wo ma hu esuadze pɔtsee a ɔwɔ mu a ibotum dze ayɛ edwuma. Fa no dɛ ɔwo nye nyia erekenkan noho asɛm no. Dwendwen dza Jehovah no nokwar asomfo yi yɛe nye mbrɛ osii boaa hɔn ma wogyinaa hɔn nsɛndzendzen ano no ho. Afei, fa esuadze a ɔwɔ mu no dzi dwuma wɔ wo tsebea no mu. Da Jehovah ase wɔ mboa a ɔdze rema wo seseiara no ho. Nkyii so, hwehwɛ ho kwan ahorow fa boa afofor na hyɛ hɔn nkuran fa kyerɛ mboa a Jehovah dze roboa wo no ho enyisɔ.
23. Dɛ mbrɛ Isaiah 41:10, 13 kyerɛ no, ebɛn anohoba na Jehovah dze abɔ hɛn?
23 Asetsena mu botum ayɛ dzen wɔ wiadze a Satan dzi do yi mu araa ma ɔtɔ da mpo a yerunnhu dza yɛnyɛ. (2 Tim. 3:1) Naaso, ɔnnsɛ dɛ yɛma hɛn akoma tu anaa yesuro. Jehovah nyim dza yɛrefa mu nyinara. Ɔabɔ hɛn anohoba dɛ, sɛ yɛhwe ase a, ɔdze ne nsa nyimfa a tum wɔ mu no bosuo hɛn mu egyina. (Kenkan Isaiah 41:10, 13.) Yɛwɔ awerɛhyɛmu dɛ Jehovah bɔboa hɛn, na Kyerɛwnsɛm no so bɛma yenya ahoɔdzen a yɛdze begyina nsɛndzendzen a yehyia no ano.
Sɛ yerusũa Bible mu nhwɛdo ahorow ho adze a, ebɛn ndzɛmba anan na sɛ yɛyɛ no ndzidzido ndzidzido a ɔbɔboa hɛn ma yeenya dza yerusũa no do mfaso?
Ebɛnadze na esũa efi Ɔhen David na ɔsomafo Paul hɔn nhwɛdo no mu?
Nyimpa a wɔakã hɔnho asɛm wɔ Bible mu no, hɔn mu woana na ebɛpɛ dɛ isũa noho adze kɔ ekyir?
NDWOM 96 Nyankopɔn Asɛm Yɛ Akoradze
^ nky. 5 Kyerɛwtohɔ piinara wɔ Bible no mu a ɔma yehu dɛ, Jehovah dɔ n’asomfo na ɔboa hɔn ma wogyina nsɛndzendzen biara a wohyia no ano. Adzesua yi bɛma ehu kwan a ibotum afa do esũa Bible no a ɔbɔboa wo ma eenya kyerɛwtohɔ a ekenkan no do mfaso kɛse.
^ nky. 2 Dɛm kwan a wɔdze sũa adze a yɛakã ho asɛm yi yɛ akwan ahorow a wɔdze sũa adze no mu kor a ibotum dze ayɛ edwuma. Sɛ ehwɛ nwoma a wɔato dzin Nhoma a Yehowa Adansefo De Yɛ Nhwehwɛmu no mu na ekɔ asɛntsir a wɔato dzin “Bible” nye asɛntsir kakraba “Sɛnea Yɛbɛkenkan Bible Ate Ase” no ase a, ibohu akwan afofor a ibotum afa do esũa Bible no.
^ nky. 14 Mma hom nnkenkan dɛm kyerɛwtohɔ yi aber a hom asafo no reyɛ Ɔweɔn-Aban Adzesua no.
^ nky. 22 Hwɛ asɛm a wɔato dzin “Suasua Wɔn Gyidi​—Mmarima Ne Mmea a Wɔwɔ Bible Mu” a ɔwɔ jw.org Twi kasa mu dze no do. (Kɔ BIBLE NKYERƐKYERƐ > ONYANKOPƆN MU GYIDI.)
Fa mona Fa mona Mbrɛ Ibesi Enya Dzenhyɛ Efi Kyerɛwnsɛm No Mu
w21 March nkr. 14-19
Mberantsɛ, Hom Besi Dɛn Ama Afofor Eenya Hom Mu Ahotodo?
Dɛ Asafo No, Hom Mboa Bible Esuafo Ma Wonnya Nkɔenyim Na Woeetum Abɔ Esu
Ɔdɔ Boa Hɛn Ma Yegyina Enyitan Ano
Jehovah Besi Dɛn Abɔ Woho Ban?
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU March 2021
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU March 2021
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU March 2021